Somalia: Xasan Shiikh oo Jarmalka u tagey kulan iyo arrimo caafimaad
Xasan Shiikh oo Jarmalka u tagey kulan iyo arrimo caafimaad
MUQDISHU, Somalia- Madaxweynaha dowlada Federaalka Somalia Xasan Shiikh ayaa maanta gaarey dalka Jarmalka halkaas oo kaga qayb galayo kulan ka dhacaya magaalada Munich.
Qoraal kasoo baxey xafiiska madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sheegaya in halkaas kaga qayb galyo kulan loogu magac darey shirka 52aad ee amniga Munich ( Munich Security Confrence)
Shirka Munich ayaa waxaa ka qeybgali doona illaa 30 hoggaamiye oo waddamada dunida ka socda iyo illaa 70 wasiirro arrimo dibadeedyo iyo difaaca ah.
Arrimaha ugu waa-weyn ee diiradda lagu saarayo shirkan ayaa waxaa ka mid ah xasiloonida dalalka saxaraha ka hooseeya oo ay Somalia ku jirto, qaabka Yurub ay uga jawaabtey qulqulka qaxootiga ku soo badanaya Yurub, dagaalka Syria, xakameynta hubka iyo cudurada ku sii baahaya dunida.
Dhinaca kale warar warsidaha Garowe Online ka helay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dowlada oo magacooda ka gaabsadey iney sheegaan ayaa sheegaya in madaxweynaha Somalia ka qayb galka kulankaan u weheliso isagoo xaalad caafimaad u tagey dalka Jarmalka.
Wararkaan ayaa intaas ku daraya ka-hor inta uu madaxweyne Xasan Shiikh u ambabaxin dalka Jarmalka uu baajiyey dhamaan kulamadii uu la qaadan lahaa howlwadeenada dowlada sababo la xiriira xaaladiisa caafimaad oo aan fiicneyn.
Lama xaqiijin xanuunka madaxweyne Xasan Shiikh balse xogogaal ayaa sheegaya inuu yahay mid u baahan in wax looga qabto wadanka dibadiisa.
Mud. Xasan Shiikh ayaa inta uusan ka ambabixin Muqdishu sidoo kale u magacaabey dalalka Turkiga iyo Ethiopia safiiro cusub kuwasoo muran ka dhex dhaliyey qaybaha kala duwan ee dowlada.
Wareegto kasoo baxdey xafiiska madaxweynaha Somalia ayaa loo magacaabey gudoomiyihii hore ee gobolka Hiraan Cabdifatax Xsaan Afrax safiirka dalka Somalia u fadhiya ururka midowga Afrika iyo dalka Ethiopia magaaada Addis Ababa halka safiirka dalka Turkiga loo magacaabey Maxamad Xaaji Madeer.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiraan ayaa xilka laga qaadey kadib markii lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa isku-dhacyo dad ku dhinteen ee ka dhacey magaalada Baledweyne.
Sidoo kale Maxamad Xaaji Madeer oo loo magacaabey safiirka dalka Turkiga ayaa waxay walaalo dhinaca hooyada ah yihiin madaxweynaha maamulka KMG ah ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan.
Magacabista Madeer ayaa dadka siyaasada la socdaa aaminsan yihiin in madaxweyne Xasan Shiikh abaal marin u siiyey Shariif Xasan madaama uu tageerey nidaamka doorasho ee 4.5 kasoo muran dhaliyey.
Xilalkaan la magaacbey ayaa wararku sheegayaan iney aad uga xumaadeen Ra'isla wasaaraha Somalia iyo gudoomiyaha Barlamanka dowlada Federaalka ah kuwasoo kulamo lahaa 24 saac ee lasoo dhaafey.
​MUQDISHU: Puntland oo ka hadashay cayaarta baaqatay [Dhagayso]
Puntland 25.07.2016. 10:31
MUQDISHU, Somalia- Waxaa maanta lagu waday in magaalada Muqdishu caasumadda Somalia ka dhacdo cayaarta kama dambaysta ah ee koobka maamul goboleedyada kaasoo ay wada dheeli lahaayeen maamullada Puntland iyo Jubbaland.
Balse, cayaartan waxaa dib loo dhigay ilaa ...
​Madaxweynaha Soomaliya oo baaritaan caafimaad u aaday Jarmalka
Soomaliya 16.06.2016. 17:44
​Madaxweynaha Somalia "Doorashada 2016 waan ka qayb galayaa"
Soomaliya 21.04.2016. 09:57
​Somalia: Madax aadday dalka Turkiga
Soomaliya 22.02.2016. 16:43
Madax ka hadashay arrimaha Somalia
Soomaliya 14.02.2016. 12:57
Xasan Shiikh oo ka ambabaxaya Muqdishu
Soomaliya 27.01.2016. 00:06